Izitebele zamahhashi | Amahhashi eNoti
Amabhulokhi Yindawo lapho izilwane zethu ziphumula khona, ngakho-ke kufanele sizilungele, ngoba lapho-ke izinkinga ziza kalula, zinezinkinga isikhumba noma kwezinye izindawo. Kumele sicabangele imininingwane eminingi lapho sihlanganisa futhi sigcina izitebele, ikakhulukazi ezingeni lenhlanzeko.
Kulesi sikhala uzothola, amathiphu, imikhiqizo nemibono ukuze amahhashi ethu abe amabhlogo ambalwa kwisitayela sakho nezidingo zakho. Khumbula ukuthi ulwazi ngamandla futhi okubaluleke kakhulu singaqoqa kangcono kakhulu, kithina nasezilwaneni zethu. Ungakhohlwa ukuthi kubo isitebele kufana negumbi lethu ngathi nokuthi kungcono sivumelane nesilwane, okuningi kuzoveza maqondana nezibopho zako, noma ngabe ezemidlalo noma cha.
Abafana abazinzile: izindima nezibopho
Umfana ozinzile ungomunye ophethe ukunakekelwa nenhlalakahle yama-equines. Umsebenzi wakho ukulawula ...
Amasu okwenza ukukhanya kwehhashi kukhanye
Ihhashi kungenzeka ukuthi lingelinye lamalungu ombuso wezilwane odlulisa ubuhle nobuhle obukhulu. Ukuthwala kwakhe okubabazekayo ...
Ukugcinwa kwebhokisi noma esitebeleni
Ukugcinwa kwehhashi kanye nokuhlanzeka kwalo kubalulekile njengekhabethe elikulo, okusho ukuthi ...
Por URosa Sanchez kwenza iminyaka 8 .
Ukuzinza kusho ukuvalelwa kwehhashi kuleli cala ku: esitebeleni, esitebeleni noma ebhokisini, futhi kuyisikhala ...
Ukubaluleka komkhuba emahhashini
Umkhuba empilweni yamahhashi ubaluleke kakhulu, kucatshangelwa ukuthi noma yiluphi ushintsho oluzumayo lunga ...
Ukusabela kwemvelo kwamahhashi
Amahhashi anokuhlukahluka okuhluke kakhulu ngokobuntu bawo ngamunye, kepha esingakuqinisekisa ukuthi ...
Uma ihhashi lisesitebeleni isikhathi eside liqala ukuba nezindlela zokuziphatha ezingezinhle, ngokwesibonelo ziyaqala ...
Kusho ukuthini ukuhamba kwezindlebe zehhashi?
Sonke esichitha izinsuku zethu ngama-equine singabona ukuhamba kwezindlebe, ezingenalutho ...
Ungasakha kanjani isitebele
Por isithombe kwenza iminyaka 11 .
Izitebele ziyisidingo kithi sonke esiphila emhlabeni wanamuhla, ngakho-ke kungaba ngamanga ukusho ...
Ezimweni eziningi sithola ukuthi amahhashi avame ukukhubeka, zombili ezitebeleni zokugibela nalapho ephethe umgibeli wawo,
Ungakwenza kanjani ukushicilelwa kwamahhashi (Ingxenye yokuqala)
Ukushicilelwa kusekelwe ekutholeni amahhashi ethu ukuthi abe nokusebenza okuthuthukayo ezintweni ezahlukahlukene lapho ...